Kazakhstan: Fanamboarana Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2018 4:55 GMT
(Fanamarihana. lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2007)
Nitranga tamin'ity herinandro ity ny fanamboarana ny governemanta ao Kazakhstan ary – tsy nisy fiavahana tamin'ity indray mitoraka ity – fotoana tena tsara indrindra mba hanopaza-maso ny tsy fahita firy any ambadiky ny fiangaly Kazakh amin'ny sehatry ny fitondran'ny samy ‘sangany avy ao anatiny’.
Araka ny voalazan'ilay manampahaizana momba ny ao Kazakhstan, Daniel Kimmage avy amin'ny Radio Free Europe / Radio Liberty, lalaovina ao anaty haizina ny tena politika Kazakh: fifaninanan'ireo vondron-tombontsoa fa tsy vondrona na tambajotram-pihavana mikaroka ny haka ny fifehezana; ary ezahan'ny filoham-pirenena Nursultan Nazarbayev ny manandrana hampifanaraka sy hampifandanja am-pahamalinana an'ireo tombontsoa mifanohitra.
Ny 8 Janoary 2007, nametra-pialana ny Praiminisitra Daniyel Akhmetov. Avy eo, nametra-pialàna ny governemanta manontolo, hetsika iray mahazatra ao anatin'ny politika kazakh. Nanao tatitra ny KZBlog tamin'ny Talata teo fa nandritra ny fotoana fitsifitsy dia niely ny tsaho ary amin'ny ankapobeny izany dia saika isaky ny volana Desambra, tao anatin'ny fepotoana fiasàna maherin'ny telo taona ananan'i Akhmetov.
Ho fanandramana fanomezana dikany an'io hetsika ara-politika goavana io, nadikan'ny fampahalalam-baovao ho fikatsahana fanomezana fahafahampo ho an'ny tombontsoan'ireo tandrefana mpamatsy vola io fanavaozana ao amin'ny faritra io. Ny anaran'i Daniyel Akhmetov no matetika misy fifandraisany amin'ny lalàna ara-barotra heverina ho tsy manome vàhana ireo vahiny mpampiasa vola.
Ny tontolombolongana amin'ny teny Anglisy, na izany aza, manampy vontoatiny mivelatra kokoa amin'ilay tantara.
KZBlog, izay nanaraka hatramin'ny fiantombohany ireo zava-misy tao Astana, dia nitatitra ny tombatombana izay nanamarika ny fotoana teo anelanelan'ilay fametrahana fialàna sy ny fanambaràna ny fanohizan'i Karim Masimov manomboka izao ny andraikitry ny Praiminisitra vaovao.
Sean Roberts, mpiray asa amin'ny Georgetown momba ny Fianarana an'i Azia Afovoany no sady blaogera, no nilaza mialoha teo amin'ny tatitra nataony Roberts Report, fa i Timur Kulibayev, zaodahin'ny Filoham-pirenena sady filohan'ny iray amin'ireo vondrona tombontsoa efatra tena lehibe indrindra, no hahazo tombontsoa avy amin'ny praiminisitra vaovao:
Masimov, etsy andaniny, dia hita ho toy ny tanora mpanarina sy liampivoarana ary heverina ho toy ny mpanan-draharaha ao amin'ny zaodahin'ny Filoham-pirenena Timur Kulibayev. Ankoatra izay, heverina ho mpikambana avy amina foko iray Uyghur izy nefa Kazakh no voasoratra ao anaty pasipaorony. Araka izany, izy no Praiminisitr'i Kazakhstan voalohany indrindra tsy kazakh no sady tsy rosiana ary voalohany indrindra tsy kazakh hatramin'ny fiantombohan'ny andiantaona 90.
Rehefa atambatra, marihin'i Roberts, ny governemanta vaovao, izay vao omaly no nanambaràna ireo olona nandrafitra azy, dia toa hetsika iray fampifandanjàna am-pahamalinana ireo vondron-tombontsoa mpifaninana rehetra.
.Raha akapoka iray, vitan'i Nazarbayev ny namorona fifandanjana iray hafa eo amin'ireo vondrom-pahefana – miaraka amin'ireo olona akaiky an'i Timur Kulibayev , Dariga Nazarbayev ary Rakhat Aliyev, sy Alexander Mashkevich, izay samy miandraikitra toerana ambony daholo.